Iindaba -I-Generac iphehlelela utshintsho lokuqala oluzenzekelayo kunye nomsebenzi odibeneyo wokujonga amandla ekhaya
I-Waukesha, iWisconsin, nge-27 ka-Matshi 2020 / i-PRNewswire / -Ukucinywa kombane ukusuka kwi-East Coast ukuya kwi-West Coast kukhokelele kwimfuno ekhulayo yejenreyitha yokugcina ikhaya. Ngokunyuka kwemali yombane1, iGeneracⓇ Power Systems (NYSE) yokubeka esweni umbane omtsha PWRview ™ automatic switch switch (ATS) isombulula ngokukodwa umceli mngeni wokukhusela amakhaya kungabikho mbane ngelixa kukhuselwa iiakhawunti zebhanki kwimithetho yombane ephezulu. : I-GNRC).
Ngokwaziswa kwe-PWRview ATS, uGenerac wakhokela ekunikezeleni iNkqubo yokuHlolwa kwaMandla eKhaya (HEMS) kutshintsho. I-PWRview ATS ivumela naliphi na ikhaya elixhotyiswe ngomvelisi wasekhaya ukuba afikelele kwangoko kwimibono enamandla kunye neendleko malunga nokusetyenziswa kwamandla kwekhaya.
Kuba ukubek'esweni kweliso le-PWRview kwakhiwe kutshintsho lokutshintsha olufunwa ngumvelisi, nje ukuba inkqubo yejenereta ifakiwe, ingqiqo ye-PWRview inokufunyanwa. Abanini bamakhaya banokuzikhuphelela usetyenziso lwe-PWRview kuyo nayiphi na i-smartphone ukujonga ngokulula ukusetyenziswa kwamandla kwamakhaya naphina emhlabeni kunye nokuvula ulwazi olungazange lubonwe ngaphambili olunokunceda ukunciphisa iindleko zamandla ukuya kuthi ga kwi-20% 2.
Inkqubo ye-PWRview ivumela abaninimzi ukuba bafikelele kusetyenziso lwamandla abo ngokubonisa okwangoku kunye ne-24/7 yokufikelela kude kusetyenziso lombane. Iidashbhodi zexesha lokwenyani zibonelela ngokuqonda okunzulu ukwazisa abaninimzi xa bechitha amandla nalapho kusetyenziswa khona amandla abo. Uqikelelo olunzulu lokulandela umkhondo kunye nokusetyenziswa kunokufundisa abaninimzi malunga namandla emikhwa yokuphelisa isimanga kwiibhili zabo zenyanga.
"Utshintsho lwe-PWRview lwenza kube lula ukonga amandla kunye nemali," utshilo uRuss Minick, iGosa eliyiNtloko lezeNtengiso eGenerac. "Ukwenza i-HEMS ibe yinxalenye yotshintsho lotshintsho kuthetha ukuba abanini bejenaretha banokugcina imali eyoneleyo ngokusebenzisa amandla asebenza ngakumbi ukucima uninzi lweendleko zenkqubo yogcino lwasekhaya, ngelixa bonwabela lonke ukhuseleko lwezisombululo zamandla okulondoloza kunye nesiqinisekiso."
Ukukhusela amakhaya namakhaya ekucinyweni kombane kunye nokwazisa ukonga umbane omtsha ngokusebenzisa iijenreyitha zokugcina amandla ombane ngePWRview, nceda undwendwele www.generac.com ngolwazi oluthe kratya.
Umthombo: I-EIA (Ulawulo lweNgcaciso yezaMandla lase-US) 2 Iziphumo zokonga umbane ziyahluka ngokuxhomekeka kumandla ombane, ubungakanani bendlu, kunye nenani labahlali.
Malunga neGenerac Generac Power Systems, Inc. (i-NYSE: i-GNRC) ngumnikezeli ohamba phambili wehlabathi wolondolozo kunye neemveliso eziphambili zamandla, iinkqubo, izixhobo zokuqhuba iinjinjini kunye neenkqubo zokugcina ilanga. Ngo-1959, abasunguli bethu bazinikezele ekuyileni, kubunjineli nasekuveliseni umvelisi wokuqala ofikelelekayo. Ngaphezulu kweminyaka engama-60 kamva, ukuzibophelela okufanayo kuphuhliso, ukuhlala ixesha elide kunye nokugqwesa kuncede inkampani ukuba ikwandise imveliso yayo ekhokelela kwimizi-mveliso ekhokelela kumakhaya nakumashishini amancinci, kwiindawo zokwakha, nakwizicelo zorhwebo neziselfowuni. I-Generac ibonelela ngenkxaso ye-injini enye kunye neenkqubo eziphambili zamandla ukuya kuthi ga kwi-2 MW kunye nezisombululo ezifanayo ukuya kwi-100 MW, kwaye isebenzisa iintlobo ngeentlobo zemithombo yamafutha ukuxhasa iimfuno zombane zabathengi bethu. I-Generac ibamba ukuPhuma kwaMandla okuPhakathi, umthombo ogunyazisiweyo wokucinywa kombane eMelika kwiGenerac.com/poweroutagecentral. Ngolwazi oluthe kratya malunga neGenerac kunye neemveliso kunye neenkonzo, nceda undwendwele iGenerac.com.